Gauri Malla - artist profile
Topic: Gauri Malla - artist profile
Author Topic: Gauri Malla - artist profile (Read 15382 times)
« on: October 30, 2011, 05:46:32 AM »
« Last Edit: June 15, 2015, 12:11:10 PM by tundikhel »
Re: Gauri Malla - artist profile
« Reply #1 on: June 15, 2015, 12:12:59 PM »
1. 2041-50: Best Actress Award for Kanyadan
2. 2003: Best Supporting Actress for Mama Ghar by Hits (FM) Nepal Pvt. Ltd., Kathmandu
3. 1999: Best Actress Award by Film Artists Association of Nepal, Kathmandu
4. 2002: Best Actress Award by Film Artists Association of Nepal, Kathmandu
5. 2002: Special Honor Award by former Queen Komal Rajya Laxmi Devi Shah, Kathmandu
6. 20: Golden Jubilee Medal conferred by HM King Birendra Bir Bikram Shah Dev, Kathmandu
7. 1988: Best Actress Award for Shradda telefilm
8. 2061 B.S. Chalchitra Abhinaya Ratna Padak by Film Artists Association of Nepal, Kathmandu
9. 2052: Best Actress Award for Nata
10.2052 B.S.: Rashtriya Gaurab Yuba Samman by Rashtriya Gaurab Yuba Samman Samiti on the occasion of the Silver Jubilee celebration of Gaddi Arohan of King Birendra
11. 2056 B.S.: Abhinandan by Sagarmatha Sahitya Kala Pratisthan, Kathmandu
12. 2056 B.S.: Commendation Award by the Crown Price Dipendra Bir Bikram Shah Dev, organized by Film Artists Association of Nepal, Kathmandu
13. 2056: Trophy honoring 100 Days celebration of Basanti film by New Century Films, Kathmandu
14. 2060: Best Character Actress Award for Mama Ghar
15. 2004: Best Actress National Award by Film Development Corporation
16. 2010: Guest of Honor by US Nepal Media Center on the occasion of the 3rd anniversary of www.usnepaloline.com
Performance at cinema (Nepali)
1. 2043-44 B.S.: Santan, produced by Royal Nepal Film Development Corporation and Om Production Pvt., Kathmandu, Nepal
2. 2044-47 B.S.: Pirati, produced by Dharma Films Pvt Ltd., Itahari, Nepal
3. 2046: Kanyadan, produced by Samjhana Films Pvt, Pokhara, Nepal
4. 2047: Chot, produced by Yeti Production Pvt, Kathmandu, Nepal
5. 2047: Lobhipapi, produced by Creative Movies Pvt, Kathmandu, Nepal
6. 2048: Pariwar, produced by Sayapatri Films Pvt, Kathmandu, Nepal
7. 2048: Aandhibehri, produced by Creative Movies Pvt, Kathmandu, Nepal
8. 2049: Gopi Krishna, produced by Sayapatri Films Pvt, Kathmandu, Nepal
9. 2048-2052: Raanko, produced by Om Trinetra Production Pvt, Kathmandu, Nepal
10. 2050: Tapashya, produced by Roshna Films, Kathmandu, Nepal
11. 2050: Chahana, Ekta Arts Pvt, Kathmandu, Nepal
12. 2050: Chatyang, Bishwamurti Films Pvt, Kathmandu, Nepal
13. 20??: Chelibeti, produced by Creative Movies Pvt, Kathmandu, Nepal
14. 2051: Nata, Track Movie Makers Pvt, Kathmandu, Nepal
15. 2051: Swarga, Ishwari Films and Shrestha Cine Concern,
16. 1995: Mahamaya, Prakash Thapa, Nischhal Shrestha, Basundhara Bhusal
17. 1994: Jhajhalko, United Films Pvt,
18. 2052: Dharma, Pacific Pictures Pvt.
19. 2052: Sarashwati, Ishwari Films Pvt.
20. : Gaunle, Laxmi Puja Films Pvt..
21. 1999: Mukundo, Mila Production Pvt,
22. : Bhai, Shree Mata Dantakali Movies Pvt,
23. :Dharma Sankat, Jharana Motion Pictures Pvt.,
24. : Gorkhali, , Jharana Motion Pictures Pvt.,
25. 2057: Basanti, New Century Films,
26. 2057: Dharti, Lotous Films Pvt.,
27. 2057: Hero, Namaste Nepal Cine Arts,
28. 2058: Arjun, Kshitiz Cine Arts,
29. 2058: Dhan Sampatti, S & S Film Production,
30. 2058: Sanyas, Lion Flms Pvt.,
31. 2059: Grahan, Tridevi Movies Pvt.,
32. 2059: Mama Ghar, Action Group Movie Makers,
33. 2059: Bishwas, Ayush Films,
34. 2059: Kahi Milan Kahi Bichhod, Director: Rishi Lamichhane
35. 20??: Jang Baaj,
36. 2008: Kathmandu, The Sky Movies Pvt., Kathmandu, Nepal
37. 2009: Yek Din Yek Rat, Director: Devkumar Shrestha
38. 1996: Avatar, Director Prakash Shayami
39. 2008: Timi Mero Ma Timro, Director: Raj
« Reply #2 on: August 10, 2015, 12:56:52 PM »
'अमेरिका जाँदैमा हल्‍ला मच्‍चाउनु पर्दैन'
०७२ साउन २३ शनिबार
२९ वर्षअघि प्रदर्शन भएको चलचित्र 'सन्तान'ले दुईजना अभिनेत्री जन्मायो। दुवै आफ्नो समयमा चर्चित बने, अझै पनि सक्रिय छन्। एउटी हुन् करिश्मा मानन्धर, अर्की गौरी मल्ल। बीचमा दुवै अभिनेत्री अमेरिका लागे।
फेरि दुवैजना फर्किए। 'करिश्मा र मेरो राशि पनि एउटै हो', यीमध्ये एक गौरी भन्छिन्, 'त्यसैले हाम्रो धेरै कुरा मिल्छ।' गौरीले भर्खरै टेलीशृंखला 'सिंहदरबार'को छायांकन सकेकी छन्।
अहिले उनको हातमा छायांकन हुन बाँकी केही चलचित्र छन्। यस्तै करिश्माको निर्माणमा बनेको 'फागु' प्रदर्शन हुन बाँकी छ। यही सेरोफेरोमा गौरीसँग कीर्तन अधिकारीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश:
टेलीशृंखला सिंहदरबारको सुटिङ बल्ल सकियो। करिब ५०/५५ दिन यसैमा व्यस्त भएँ। केही दिनमै राजु अधिकारी निर्देशित चलचित्र 'ऐना'को छायांकन सुरु हुँदैछ।
यसमा सरोज खनालसँग अभिनय गर्दैछु। धेरैपहिले 'दैवसंयोग' मा सँगै काम गरेको थिएँ। त्यसपछि उहाँसँग काम गरिएको छैन। त्यसपछि आकाश अधिकारीको 'के म तिम्रो होइन र'मा काम गर्छु।
सिंहदरबारको धेरै चर्चा छ, के छ यसमा खास?
यो राजनीतिक विषयवस्तुमा आधारित शृंखला हो। यसमा एकजना महिला प्रधानमन्त्री छन्। एकजना विवाहित सन्तानकी आमाले घर र देशको व्यवस्थापन सँगै गर्छिन्।
चाकरी मन नपराउने, राम्रो काम गरेमा शत्रुको पनि प्रशंसा गर्ने, आफ्नो पराई भनेर भेदभाव नगर्ने प्रधानमन्त्री छन्। असल नेतामा हुनुपर्ने सबै गुण भएको पात्रका रूपमा मैले अभिनय गरेको छु। यसमा राजनीतिज्ञलाई झक्झक्याउने विषय छ।
यस्तो चरित्रमा कसरी आबद्ध हुनुभयो?
छिरिङरितार शेर्पासँग 'मुकुण्डो'देखि काम गरेको थिइनँ। यत्तिकैमा एक दिन उहाँले सिंहदरबारको बारेमा कुरा गर्नुभयो। यसमा महिला प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो।
मैले किन भनेर सोधेँ। उहाँले यो पात्रका लागि मेरो अनुहार सबभन्दा उपयुक्त भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मेरो अनुहारले सबै जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ रे। मेरो अनुहार समावेशी रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यो चरित्र पनि मलाई मन पर्‍यो।
ठूलो पर्दा छोडेर टेलीशृंखला किन रोज्नुभयो ?
पहिलो कुरा त छिरिङसँग 'मुकुण्डो' मा काम गर्दा नै प्रभावित भएको थिएँ। उहाँसँग सिक्ने मौका गुमाउन चाहन्न थिएँ। म अमेरिकामा हुँदादेखि नै उहाँसँग काम गर्ने चाहना थियो, कुरा भइरहन्थ्यो। अमेरिका बसेर आएपछि केही चलचित्र गरेँ।
यो शृंखला र भूमिका मेरो राम्रो कमब्याक पनि हुन्छ। यसको भूमिकाले पनि मलाई तान्यो। राजनीतिको केन्द्रबिन्दु प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा अभिनय गर्दैछु। अरु नै भूमिका थियो भने पनि नो भन्ने कारण थिएन।
वास्तविक राजनीतिमा नेताहरूको भूमिका कस्तो लाग्छ?
ग्ल्यामर उनीहरूको बढी छ। देशको केन्द्रबिन्दुमा छन्। सबैको आशाभरोषा र विश्वास नै राजनीतिक नेताप्रति छ। तर, केन्द्रमा उनीहरू नै छन्।
यो पात्रको रूपमा अभिनय गर्दा मलाई पनि नेताको भूमिकासम्बन्धी धेरै विषयको ज्ञान भायो। यो शृंखला हेरे भने नेताहरूले पनि केही ज्ञान पाउलान्। उनीहरूले जनताको विश्वासअनुसार काम गरेका छन् छैनन् आफ्नो ठाउँमा छ।
कलाकारको चाहिँ ?
हामीले मनोरञ्जनसँगै शिक्षा सन्देश दिन सक्छौं। तर नेताहरूसँग जनताका हजारौं प्रश्न र अपेक्षा छन्। हामीसँग त्यति अपेक्षा हुँदैन।
राजनीतिमा लाग्ने योजना छैन ?
(हाँसो) । म त्यति पागल छैन। क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। यस्तो कुरा कहिल्यै सोचिएन। मेरो लागि कलाकारिता नै ठूलो कुरा हो। त्यही भूमिकामा समाजमा प्रस्तुत हुन्छु।
अमेरिकाबाट किन फर्किनुभयो ?
यो साधारण कुरा हो। परिवारभन्दा ठूलो कुरा अरू छैन। मुमाको स्वास्थ्य खराब थियो।
पहिले उहाँको ब्रेस्ट क्यान्सरको अपरेसन गरिएको थियो। पछि मुटुमा समस्या देखियो। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई छोडेर विदेशमा बस्न मन लागेन, त्यसैले फर्किएँ।
अहिले कलाकार अमेरिका जाने फर्किने क्रम चलिरहेको छ, कस्तो लाग्छ ?
यो हल्लाखल्ला गरिरहनुपर्ने कुरै होइन। मान्छेको व्यक्तिगत जीवन पनि त हुन्छ नि। त्यहाँ सुख, दुःख, समस्या, खुसी सबै कुरा हुन्छ।
व्यावसायिक र व्यक्तिगत जीवन फरक कुरा हुन्। कोही व्यावसायिक रूपमा एउटा क्षेत्रमा सन्तुष्ट भएनन् भने अर्को क्षेत्र रोज्न सक्छन्। विदेश जान सक्छन्, विदेशबाट फर्कन सक्छन्।
आफ्नो जीवन कता लैजाने भन्ने सामान्य कुरा हो । यसलाई टीकाटिप्पणीको विषय बनाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्र कता गइरहेजस्तो लाग्छ?
यो क्षेत्रलाई नराम्रो भन्न हुँदैन। चलचित्र बनिरहेको छ। संख्यालाई अलि कम गरेर गुणस्तरीय चलचित्र बनाउन सक्यौं भने अझ राम्रो होला। अहिले चलचित्र क्षेत्र कागलाई हेलमेट लगाइदिएजस्तो छ।
धान्‍न नसक्ने। अलि संख्या कम गर्न सके लगानीकर्ताको क्षति कम हुन्थ्यो। वर्षमा यति संख्यामा चलचित्र बनाउने भन्ने समझदारी भए राम्रो हुन्थ्यो। यसका लागि प्रभावकारी नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
अहिले चलचित्र विकास बोर्डले बनाएको चलचित्रको मापदण्ड कस्तो लागेको छ?
मापदण्ड मैले अध्ययन गरेको छैन । नबुझेको कुरामा टीकाटिप्पणी गर्नु त्यति राम्रो होइन। तर विकास बोर्डले नीतिनियम जारी गर्ने तरिकाचाहिँ त्यति चित्तबुझ्दो छैन।
विकास बोर्ड त चलचित्र क्षेत्रका लागि सिंहदरबारजस्तै हो। यसले नीतिनियम र मापदण्ड तयार गरी लागू गर्दा पर्याप्त गृहकार्यसहित गर्नुपर्छ। प्रभावकारी नीति बनाएर कुनै एक व्यक्तिबाट जारी गरिँदा राम्रो हुन्छ।
समकालीन कतिपय नायिका यो क्षेत्रबाट पलायन भए, तपाईं किन फेरि फर्किनुभयो?
आउनेजाने त संसारकै नियम हो नि। संसारमा को पो चिरस्थायी छ र? फिल्म क्षेत्र त एउटा सानो ठाउँ हो। त्यसमा आउनेजाने धेरै हुन्छन्।
कोही यसमा बस्दैनन् होला, कसैको बाध्यता होला, कसैलाई पेसा परिवर्तन गर्न मन लाग्ला। यहीँ नै रहनुपर्छ भन्ने छैन।
नयाँ पुस्ताका कलाकारको भूमिका कस्तो लाग्छ ?
राम्रो छ । पछिल्लो समय अध्ययन गरेका कलाकार पनि धेरै छन्। तर, उनीहरूको भूमिका एकै किसिमको लाग्छ। अभिनयमा विविधता देखिन सकेको छैन।
यसमा स्क्रिप्टको पनि कमजोरी हुनसक्छ। निर्देशनमा पनि कमजोरी हुनसक्छ वा कलाकारले पनि विविधता नखोजेका हुन सक्छन्। यस्तै हामी आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोगवादी हुन थालेका छौं।
कलाकारको क्षमता नबुझी प्रयोगात्मक भूमिकामा अभिनय गराउने । यीबाहेक नयाँ कलाकारको उपस्थिति एकदमै राम्रो छ।
विगतको तुलनामा तपाईंको सक्रियता घटेको हो ?
दशकअघि पनि मेरो व्यस्तता उस्तै थियो, अहिले पनि उस्तै छ। म एकैपटक धेरै चलचित्रमा काम गर्दिनँ। कहिलेकाहीँ व्यावहारिक कारणले एकसाथ धेरैवटामा काम गर्नु छुट्टै कुरा हो।
तर, बिहान एउटामा, दिउँसो अर्कोमा गर्दा भूमिकालाई न्याय गर्न सकिँदैन। एउटा भूमिकामा अभिनय गरेपछि त्यसैमा डुबेर गर्छु। मलाई आफू कम सक्रिय भएजस्तो लाग्दैन।
निर्माण निर्देशनमा लाग्ने योजना, चाहना छैन ?
छ, छिटै नै मलाई निर्माता वा निर्देशकको भूमिकामा देख्न सक्नुहुन्छ। हामी पाँचजना महिलाको एउटा समूह छ।
यसमा कलाकारहरू सीता गुरुङ, लक्ष्मी श्रेष्ठ, श्वेता खड्का, देवी ओली र म छौं। हामीले सामाजिक विषयको टेलीशृंखला बनाउने तयारी गरिरहेका छौं। हास्यविधामा धेरै छन्।
कसैमाथि टीकाटिप्पणी गर्न खोजेको होइन तर नेपालमा गम्भीर किसिमका र सामाजिक विषयवस्तुका स्तरीय टेलीशृंखलाको खाँचो छ। यो समूहले निर्माण गरेको शृंखलामा अभिनयभन्दा फरक भूमिकामा पनि म हुन्छु।
« Reply #3 on: January 04, 2016, 10:03:35 AM »
गौरी मल्लको स्वरमा महदेखि पचण्ड पुत्रसम्म लठ्ठ (फोटो फिचर)
अभिनेत्री गौरी मल्ल कुनै व्यवसायिक गायिका होइनन् । तर, साथी सर्कलको अनुरोधमा भने उनले केही भजन तथा आधुनिक गीतहरुमा आफ्नो स्वर दिएकी छन् । उनका केही भजनहरु हिट पनि भएका छन् । तरपनि गौरी आफुलाई व्यवसायिक गायिका भन्न रुचाउँदिनन् । यद्पी उनको स्वर कुनै व्यवसायिक गायिकाको भन्दा कम सुनिन्नन् । अंग्रेजी वर्ष २०१६ को जनावरी एकमा यी अघोषित गायिका बखुण्डोलस्थित एक रेष्टुरेन्टमा सुमधुर सुनिइन् । उनको स्वरमा बरिष्ठ फिल्मकर्मी निर शाह, मह जोडीदेखि ए.नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्र प्रकाश दाहालसम्म लठ्ठीए ।
नेपाली र हिन्दी गरी आधा दर्जन गीत गाएकी गौरीलाई सबैको सल्लाह थियो, ‘तपाई अब गायनतिर लाग्नुस् ।’ गायक समेत रहेका मह जोडीले गौरीलाई एल्बम नै निकाल्न सल्लाह दिए । उनले पनि एल्बमको लागि गीत रेकर्डिङ गरिसकेको तर निकाल्न भने समय नमिलेको बताइन् । यद्पी गौरीले आफु व्यवसायिक गायिका हुन नसक्ने बताइन् । अंग्रेजी नयाँ साल तथा कलाकार अनुरागमानसिंह कुँवरको जन्मदिन मनाउन उक्त बखुण्डोलको रेष्टुरेन्टमा नेपाली फिल्म जगत्का अग्रज कलाकारदेखि कान्छा नायक संयम पुरीसम्म सहभागी थिए ।
« Reply #4 on: June 27, 2016, 01:23:11 PM »
‘पढ्ने बानीकै कारण पहिलो फिल्म पाएँ’
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेला
जेष्ठ १८, २०७३- राजधानीको भृकुटीमण्डप यति बेला पुस्तक पारखीका लागि केन्द्र बनेको छ ।
पुस्तक मात्रै नभई साहित्यिक अन्तरक्रिया, स्रष्टा भेटघाट, हस्ताक्षर लगायतका गतिविधिले प्रदर्शनी मार्गस्थित एक्जिबिसन हलको माहोल रचनात्मक बनिरहेको छ । शुक्रबारदेखि यहाँ जारी २० औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीमा आफूले चाहेका पुस्तक खोज्न पारखीहरू धाइरहेका छन् ।
प्रदर्शनीको चौथो दिन सोमबार ‘पठन संस्कृति’ अन्तरक्रियामा अभिनेत्री गौरी मल्ल सवाल–जवाफ क्रममा थिइन् । उनले अध्ययनकै कारण आफूले कला क्षेत्रमा प्रवेश पाएको अनुभव सुनाइन् ।
‘मेरो वाचन गर्ने शैली पनि राम्रो थियो,’ अनिल शाहसँगको अन्तरक्रियामा उनले भनिन्, ‘यतिसम्म कि कक्षामा सरहरूले सधैं नाटक र कथा पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो । पढ्ने बानीले जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याउने रहेछ ।’
अध्ययनले आत्मविश्वास बढाउने र यही कारण आफूले पहिलो फिल्म ‘सन्तान’ मा काम गर्ने अवसर पाएको उनले खुलाइन् । ‘अनुहार त मेरो खासै राम्रो थिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर आत्मविश्वासका साथ संवाद प्रस्तुत गर्दा म छानिएँ ।’
अहिलेसम्म पढेका कृतिमध्ये चाहिँ उनले रुसी साहित्यकार म्याक्सिम गोर्कीको उपन्यास ‘आमा’ सँगै ‘महाभारत’ को सन्दर्भ उक्काइन् । ‘महाभारतमा कृष्णको चरित्र र आमाको पावेलको चरित्रबाट म निकै प्रभावित छु,’ उनले भनिन् ।
आफ्ना सन्तानलाई यो वा त्यो किताब पढ भन्दै दबाब दिनुको सट्टा पहिले पढ्ने बानी बसाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘बानी बसेपछि आफैं खोजीखोजी पढ्छन्,’ उनले भनिन् ।
उमेरले चार दशक नाघेकाले आफू चाहिँ यति बेला रमाइलोभन्दा पनि बिस्तारै आध्यात्मिक र खोजमूलक पुस्तकतिर रम्न थालेको उनले बताइन् ।
बैंकर शाहले पनि पढ्ने बानीकै कारण आफू बैकिङ क्षेत्रमा आएको बताए ।
प्रदर्शनी स्थलमा स्वदेशी र विदेशी गरेर ६० भन्दा बढी प्रकाशक तथा वितरकहरूले एक सयभन्दा बढी स्टल राखेका छन् । ‘पढ्नलाई प्रेरणा’ नारा दिइएको प्रदर्शनी उत्साहजनक रहेको आयोजक ग्लोबल एक्स्पोजिसनका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष छेत्रीले जनाए ।
‘आगन्तुकहरूको सुविधाका लागि सधैंझैं यसपालि पनि नाम चलेका विभिन्न विदेशी प्रकाशकहरूका किताब पनि राखेका छौं,’ निर्देशक छेत्रीले भने ।
उनका अनुसार अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, पेन्गुइन, रेन्डम बुक हाउस, टेलर एन्ड फ्रान्सेस, न्यु एज इन्टरनेसनलजस्ता विश्वमै चर्चित प्रकाशकका स्टल पनि छन् । ‘नेपाली प्रकाशकहरू त छुट्ने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘साहित्य, संस्कृति, समाज, विज्ञान, दर्शन, बालबालिका, महिला, राजनीति, जीवनशैली, कला लगायत दर्जनौं विधाका पुस्तकहरू राखिएका छन् ।’
यो प्रदर्शनी दुई दशकअघिदेखि नियमित रूपमा हुँदै आएको छ । शुक्रबार सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा उद्घाटित प्रदर्शनीमा साहित्यकार गीताकेशरी, माया ठकुरी र पद्मावती सिंहलाई ‘राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान’ प्रदान गरिएको थियो ।
प्रकाशित: जेष्ठ १८, २०७३
gauri malla .jpg (150.3 kB, 800x585 - viewed 273 times.)
« Reply #5 on: June 27, 2016, 01:29:41 PM »
अभिनेत्री गौरी मल्ललाई चलचित्र क्षेत्रमा लैंगिक विभेद भएजस्तो लाग्दैन रहेछ। अहिलेभन्दा आफूले अभिनय सुरुआत गर्दाको अवस्थामा महिलालाई चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सजिलो भएको अनुभव उनको छ।
राजधानीको बत्तीसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा अनियन फिल्म्स्ले शनिबार आयोजना गरेको ‘द मुभी क्लब’ कार्यक्रममा आफूले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको समयलाई उनले सम्झिइन्।करिब ३० वर्षअगाडि गौरी आफ्नी दिदीको जेठाजूको घरमा बस्दा त्यहाँ बसुन्धरा भुसालको आवतजावत हुन्थ्यो।
दिदीको जेठाजूकी छोरी आफ्नै उमेरकी भएकाले दिदीको घरमा भन्दा त्यहाँ उनी बढी बस्थिन्। गायनमा रुचि भएकी गौरीको रेडियो नेपालमा गीत रेकर्ड गराएरै छोड्ने चाहना थियो। तर, एक दिन बसुन्धरा भुसालले उनी बसेको घरमा आएर ‘सन्तान’ चलचित्रका लागि अभिनेत्रीको खोजी भएको सुनाइन्।
गौरीकी दिदीकी जेठानीले उनलाई देखाउँदै ‘यहीँ छ नि कलाकार, लैजा न’ भनिन्। वसुन्धरा भुसालले यो कुरा निर्देशक प्रकाश थापासँग भनिन्।गौरीले कहिल्यै अभिनेत्री बन्ने विषयमा सोचेकी थिइनन्। त्यसैले ‘नाइँ’ भनिन्।
तर पनि परिवारका सबैले अभिनय गर्न दिएको दबाबका कारण उनले फोटो खिचाएर निर्देशककहाँ पठाइन्। निर्देशकले आफ्नो परिवार, प्रोडक्सन हाउस जता देखाए पनि गौरीको तस्बिर कसैले मन पराएन। मान्छे नै हेर्न भनेर उनलाई प्रोडक्सन हाउसमै बोलाइयो।
तर सबैले उनलाई देखेर नाक खुम्च्याए। त्यही बेला प्रोडक्सन हाउसमा करिश्मा कुनै कामले आएकी थिइन्। करिश्मालाई देखेर गौरी ‘ट्वाँ’ परिन्। उनले भनिन्, ‘भगवान्ले यति राम्रो चीज पनि बनाउँछजस्तो लाग्यो, करिश्मा जताबाट हेर्दा पनि साह्रै राम्री।’
कसैले गौरीलाई मन नपराए पनि उनलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न मिल्ने अवस्था थिएन। उनका भिनाजु र भिनाजुका दाजु सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी। पञ्चायतकालमा सुरक्षा निकायका कर्मचारीको परिवारका सदस्यलाई ‘रिजेक्ट’ गर्ने आँट कमैमा हुन्थ्यो। उनलाई स्क्रिन टेस्टका लागि बेलाइयो।
अरू सबैलाई छोटो र सजिलो डायलग दिइयो। गौरीलाई सीधै ‘नो’ भन्न नमिलेपछि उनलाई लामो डायलग बोल्न लगाइयो। तर उनले ‘वन टेक’मै अभिनयसहित डायलग बोलेपछि निर्देशकले उनलाई नै रोजे। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
gauri malla.jpg (31.01 kB, 214x560 - viewed 303 times.)
« Reply #6 on: January 19, 2017, 03:15:21 PM »
how much do nepali movie actors/actress make? please input your opinion if you have any idea.
Page created in 0.036 seconds with 35 queries.